ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင် …. | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း ATH ● ဟိုလို ကာမယ် ... ဒီလို ကာမယ် ...
မတ်လ ၃၊ ၂၀၁၂
One Response to ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင် ….
Ko Shwe on March 4, 2012 at 7:59 am
တပ်ထဲမှာ စကားတခွန်းရှိပါတယ် မှန်လျှင်သေသည် G3တဲ့။